महिला हिंसा र नारी दिवस – धौलागिरी खबर
महिला हिंसा र नारी दिवस
धौलागिरी खबर	 २०७७ फाल्गुन २५, मंगलवार ०६:५० गते मा प्रकाशित 433 0
म्याग्दी । आज १११ आँै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार भन्ने मुल नाराका साथ महिला दिवस मनाउन गइरहेका छौँ । हो यो संसारमा महिलाले आधा आकाश ढाकेका छन् । संसारमा पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै छ । आफ्नै घर, परिवार देखि लिएर समाज, विद्यालय जहाँ पनि महिलाको संख्या न हामी धेरै पाउँछौँ । जुन महिलाले पाउनै पर्ने अधिकार नपाए पछि महिलाहरु धेरै कुरा बाट बन्चित भएका थिए तर अहिले यो अवस्थामा थोरै भए पनि कमी आएको छ । पुरै निर्मुल चाँहि भएको छैन । नारी भएकै कारण पाउनु पर्ने हक अधिकारबाट बञ्चित गरि शारिरिक र मानसिक पिडा दिनु नै महिला हिंसा हो । यस्तो अवस्था हामी विश्वमै देख्न सकिन्छ । पाकिस्तानमा पहिलो पटक मलालाले महिला हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउँदा उनलाई गोली हानिएको थियो । उनी गोली लागेर करिव १ वर्ष अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नु प¥यो । उनि सानै उमेरबाट महिला हिंसा विरुद्ध उठेकी थिइन फल स्वरुप संसार भरिकै चिनारी भएकी थिइन ।
माया कि खानी सौन्दर्य की रानी जस्ता शब्दको मालाले मन छियाछिया हुँदा पनि मुस्कुराउने एक अद्भुत कलाकार हुन् महिला । अहिले पनि हाम्रो पुरुष प्रधान समाजमा बलात्कार, बोक्सी प्रथा, घरेलु हिंसा, दाइजोको नाममा कुटपिट, ज्यूदै जलाउने जस्ता अमानविय व्यवहार अहिले पनि व्याप्त छन् । जसले गर्दा नारीहरु कहिँ पनि सुरक्षित नभएको देखिन्छ । समाजका कतिपय महिलाहरुले अरुहरुले गरेको दुव्र्यवहार भोगेको अरुको सामु पोख्न नसकी पिडामा च्यापिएर मनका रोदन र पिडाका आँशुले हर रात सिरानी भिजाइरहेका लाखौँ नारीको दर्दनाक र कहाली लाग्दो अवस्था हो महिला हिँसा । जहाँ सुन्दर शान्त समाज र राष्ट्रमा तगारो बनी उभिरहेको छ । त्यहि तगारो उघारी हामी महिला र पुरुष एक रथका दुइ पाङ्ग्रा भई अघि बढ्न सकेमा पक्कै पनि विकासका दियोहरु हाम्रो समाजमा बल्ने थिए । तर विडम्बना हाम्रो यो पछि परेको पुरातन समाजले कहाँ बुझ्छौँ र ? यसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा त हामी महिला र पुरुष उल्टो अर्थ लगाउँछौँ । यिनीहरु उल्टो अर्थ होइनन् । महिला र पुरुष दिन र रात भनेको फरक बस्तु पो हो त । दिनले रातलाई रातले दिनलाई पुरा गरे जस्तै महिलाले पुरुषलाई पुरुषले महिलालाई पुरा गर्छ । यदि महिला नभए पुरुष कसरी हुेन र पुरुष नभए महिला कसरी पुर्न हुन्छन् ? हाम्रो समाजले पुरुषलाई पुर्न जस्तो र महिलालाई आदि जस्तो व्यवहार गर्छ । जुन एकदमै गलत छ । सधैँ महिला नै शोषित हुनु पर्ने ? महिला नै सधैँ तल परेर थिचिएर बस्नु पर्ने ? अब हामी महिला पनि मुख थुनेर र हात बाँधेर बस्नु हुँदैन ।
महिला माथि हुने हिंसाहरु दिनानु दिन बढिरहेका छन् । थाहा छैन रजस्वाला हुँदा छाउपडी गोठमा गएको बहिनी भोलिको सुर्य देख्न पाउँछिन कि पाउँदिनन्, जङ्गलमा दाउरा घाँस गर्न गएका दिदी सुरक्षित घरमा आउँछिन कि आउँदिनन् घरमा अभिभावकहरु शंका र चिन्तामा बस्नु पर्ने अवस्था छ । सुदुर पश्चिममा देउकी बनेर, झुमा बनेर बसेका दिदी बहिनीको जिवनमा उज्यालो दिन आउँछकी आउँदैन अहिलेको समयमा पनि थाहा छ्रैन । कानुनमा महिला अधिकार त लेखियो नि तर खाई व्यवहारमा पालना भएको अझै प्रस्ट देखिएको छैन ।
हामी छोराछोरी दुबै बराबरी भन्छौँ तर हाम्रो समाजमा छोरा जन्मिदा खुसीले बेलुन फुटाउँछौँ तर आफ्नै घर भित्र मानवीय संस्कार भुलेर चेलिबेटी बलात्कृत हँदा सम्म हाम्रो समाज केही नभएको जस्तो चुपचाप बसिदिन्छ । महिला पुरुष बराबरी भन्ने भए महिला कोटा किन राखियो ? कोटा राखेर पनि किन पालना गरिएन । अब हामी सबै मिलेर, समन्वय गरेर महिला हिंसा विरुद्ध अघि बढ्नुपर्छ । आजै देखि अध्ययन अनुसन्धान गरौँ होटल, रेष्टुरेन्ट, कलकारखाना, भट्टिहरुमा जहाँ महिला माथि कुदृष्टि लगाउने गरिन्छ । जस्ले गर्दा धेरै नारीहरु घर न घाटमा भएका छन् । हामीहरुले अदालतमा गएर हेर्नुपर्ने छ जहाँ महिला माथी भएका दुव्र्यवहारका मुद्दालाई कतै कुना तिर थन्काएर राखिन्छ र ढिला मात्र निर्णय गर्ने गरेको पाइन्छ । अपराधिले पनि अपराध गरे छानबिन गरेर सजाए पाई उस्ले त्यो गल्ती दाहो¥याउँदैन नै वरिपरिका मानिसलाई समेत राम्रो सल्लाह दिइ गल्ती गर्नबाट सचेत बनाइदियोस । पिडकलाई सजाय र पिडितलाई क्षेतिपुर्ति र सम्मान जनक जीवन ज्युन सकुन र मात्र हामीले महिला हिंसा र शोषणमुक्त राष्ट्र पाउन सकिन्छ ।
१११ औ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक विकास परियोजनाको प्रायोजन सेवामा परेका बालबालिकाको साझा समुह सम्भावना समुहले आयोजना गरेको निवन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हुन सफल निवन्ध ।